Shiinaha 34 iyo 4 soosaarayaasha isku xirayaasha pin iyo alaableyda | Chapman
✭ Isku xiraha waa wakiil ama duub ku wareegsan API kaas oo u oggolaanaya adeegga aasaasiga ah inuu la hadlo Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps, iyo Azure Logic Apps. Waxay siisaa waddo dadka isticmaala ay ugu xirmaan xisaabaadkooda ugana faa'iideystaan ​​dhowr falal horay loo dhisay iyo kiciyeyaal si ay u dhisaan barnaamijyadooda iyo qulqulka shaqada.
✭ Xaqiijinta qaybta balaastiggu waa mid aad u saraysa, booska la jaan qaadayana wuxuu u baahan yahay in lagu sameeyo dulqaad 0.01-0.02mm gudahood ah. Maadadiisu waa LCP maadada dabka aan dabka lahayn ee V0.
✭ Badeecadani waxay u baahan tahay in lagu soo saaro mashiinka wax lagu duro ee xawaaraha sare leh, oo leh wareeg duritaan gaaban iyo saxnaanta sheyga sare. Wareegga cirbadeynta waa in lagu xakameeyo 15-25 ilbidhiqsi gudahood si loo hubiyo in cabbir kasta oo badeecaddu ay tahay mid joogto ah.
✭ Shuruudaha caaryada ayaa sidoo kale aad u sarreeya, booska dekedda isku xirnaanta badeecaduna waxay u baahan tahay in laga sameeyo noocyo gaar ah oo la gelinayo, dulqaadka gelintana waa in la damaanad qaadaa inta u dhexeysa dulqaadku yahay 0.005mm
Qaab MAYA. CPM-150220
Qalabka caaga ah LCP
Miisaanka qaybta 3.5g
Cabbirka qaybta 48.00 * 14.1 * 8.2 mm
Codsiga Isku xirayaasha
Cabirka caaryada 250 * 300 * 321mm
Magaca Qaybta 34 iyo 4 isku xiraha pin
Wax caaryada S136 / S50C / S-7
Waqtiga Hogaaminta 25 maalmood
Qaab Wareega Waqtiga: 16's
1.Contact are are machined from daaha adag copper iyo dahab dahaadhay ；
2.Couplers iyo meydadka weel ayaa laga heli karaa aluminium anodized mugdi ah, nylon ama ahama
3.Plugs waxaa loo sameeyaa fiilooyin dabacsan oo dheeri ah si ay u sameeyaan dhisme hal-gabal ah ；
4.Plugs waxaa lagu dhejiyay giraan isku dhejin bir ah oo ka hortageysa in caaggu sii xumaado wuxuuna kordhiyaa iska caabbinta ；
5.Deejooyinka waxaa lagu tuuray qolof leh epoxy darajada korantada ；
6 Biinleyda Mile waxay leeyihiin shabaq fiiqan oo salka ku haysa salka xiriir kasta oo hubiya dareeraha ciriiriga ah iyo boodhka ku habboon oo adag marka unugyada la adeegsanayo
7.waxaa laga helay si loo hubiyo isku-xirnaanshaha saxda ah marka la hawlgalayo unugyada ragga iyo dumarka ；
8.Binalka dhulka ayaa la dheereeyay kaas oo xaqiijinaya isku xirnaanta korantada oo amni leh maxaa yeelay waa biinki ugu horreeyay ee hawl gala iyo kan ugu dambeeya ee kala baxa ；
Isku xirayaasha iyo fiilooyinka iskuma dhafan doonaan ama ma beddeli doonaan jawigan heerkulka sarreeya.
Hore: Qalabka cabbiraadda heerkulka
Xiga: Daboolka taageere
Daboolka qalabka adeegga ee saxda ah